Inona ny fizotran'ny fanontana sublimation Ny fanontana famindrana famoahana voalohany dia mampiasa pirinty hanonta ireo loko pirinty manokana amin'ny taratasy famindrana, ary avy eo manafana sy manery hamindra ireo loko amin'ny lamba. Manokana, mifototra amin'ny toetra sublimation ny manaparitaka loko, mifidy disper ...
T-shirt dia lamaody malaza ankehitriny
T-shirt dia lamaody malaza ankehitriny. Izy ireo dia tsotra, tsotra ary mora vidy. Notadiavin'ny besinimaro izy ireo. Ka marika firy T-shirt no eny an-tsena, ary rehefa mivory sy misakafo ny namana dia mitete amin'ny akanjo ny tasy. Ahoana ny fanadiovana azy ireo? 1. Avadiho ny T-shirt alohan'ny hisasana, ka ...